Neymar Jr oo doortay kooxda uu ku biirayo … Barcelona mise Real Madrid? – Gool FM
Neymar Jr oo doortay kooxda uu ku biirayo … Barcelona mise Real Madrid?
(Paris) 19 Agoosto 2019. Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa go’aamiyay kooxda uu doonayo inuu ku biiro haddii uu ka dhaqaaqo safka Paris Saint-Germain.
Neymar Jr ayaa go’aansaday inuu u dhaqaaqo kooxdiisii hore ee Barcelona inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga, isagoo doorbiday in markale uu ka garab ciyaaro asxaabtiisii hore sida Lionel Messi iyo Luis Suarez, halkii uu kaga biiri lahaa Real Madrid.
Waxaa jira loolan xoogan ee u dhexeeya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee ku aadan sida ay ku heli lahaayeen saxiixa Neymar Jr inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Si kastaba ha noqotee xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa talaabo u jira inuu ka tago kooxda Paris St Germain maalmaha soo aadan ee ka harsan suuqan kala iibsiga ee xagaaga, kaddib markii uu si cad u sheegay inuu doonayo ka tagista garoonka Parc des Princes.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Le Parisien” ee dalka France Neymar Jr wuxuu doortay inuu u dhaqaaqo Barcelona, mana doonayo inuu u ciyaaro koox aan Barca aheyn, sidoo kale ma xiiseenayo inuu ku biiro Real Madrid.
Kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayaa wadahadalo dheer ugu jira heshiiska Neymar Jr, laakiin ilaa hadda ma aysan gaarin wax heshiis ah.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda PSG ee reer Brazil Leonardo ayaa horey u xaqiijiyay inay jirto suurtogalnimo uu Neymar kaga dhaqaaqi karo Paris Saint-Germain, isla markaana ay jiraan wada hadalo arrintaas ku saabsan.